#SOSNicaragua: Mpanao fihetsiketsehana 25 sy mpanao gazety iray farafahakeliny no namoy ny ainy tao Nikaragoà, hoy ny vondrona mpiaro ny zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Ελληνικά, English
Mpanao fihetsiketsehana maty tao Nikaragoà, nohamafisin'ny tranonkalam-baovao tsy miankina Confidencial. Sary nangonin'ny Confidencial. Sary tsirairay avy amin'ny fantsona media sosialy isan-karazany.
Ao Nikaragoà, nanjary fahatezerana manerana ny firenena ho fanoherana ny kolikoly, ny sivana ary ny famoretana ankapobeny ilay fihetsiketsehana fanoherana ny fanovana ny fiahiana ara-tsosialy.
Tao anatin'ny dimy andro monja nanaovana ny fihetsiketsehana, nanao famoretana feno herisetra ny governemanta. Raha nilaza ny loharanom-baovaom-panjakana fa folo no maty, manombatombana kosa ireo vondrona mpanao fihetsiketsehana sy mpiaro ny zon'olombelona fa olona 25 no namoy ny ainy tao anatin'ny fihetsiketsehana, maro ireo naratra ary am-polony avy ny fisamborana sy ny fanjavonana. Anisan'ny namoy ny ainy ny mpanao gazety iray sy polisy iray.
Maro ireo tambajotra fahitalavitra noraràna tsy hamoaka ny fihetsiketsehana. Sarotra nidirana talohan'ny namoahana ity lahatsoratra ity ny Confidencial, tranonkalam-baovao tsy miankina eo an-toerana izay mitatitra ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana namoy ny ainy.
Ny 18 Aprily, nandany didim-panjakana tsy nifampierana mampihena 5% ny vola fisotroan-dronono sy nametraka hetra fanampiny amin'ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny governemanta, tarihin'ny filoha Daniel Ortega sy ny ramatoan'ny firenena Rosario Murillo (vadiny), izay filoha lefitra ihany koa.
Ho setrin'izany, nikarakara fihetsiketsehana am-pilaminana ny mpisotro ronono sy ny mpianatra mba haneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo saingy nifanehatra tamin'ny polisy misahana ny rotaka sy ny Tanora Sandinista mpikambana ao amin'ny vondrona milisy mpanohana ny fitondrana. Nipoitra tao ny korontana. Nivadika ho herisetra ny fifandonana ary nilaza ny mpanao fihetsiketsehana sasany fa mampiasa bala tena izy ny polisy.
Maty voatifitra tamin'ny 21 Aprily ilay mpanao gazety an-dahatsary Ángel Gahona raha nandefa mivantana ny fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny Facebook Live.
Nandany ny efatra minitra farany tamin'ny fiainany tamin'ny fitantarana ny fihetsiketsehan'ny tanora sy ny fahatongavan'ny polisy misahana ny rotaka androany alina tao Bluefields ilay mpanao gazety Nikaragoàna Angel Eduardo Gahona. Nampiaina mivantana ny fihetsiketsehana tao amin'ny facebook izy no indro fa voatifitra ary maty. Ity no fampitana farany nataony:
Mpanao gazety hafa no voatafika sy niharan'ny herisetra, ary nangalarina ny fitaovany. Mifanindran-dalana amin'izany ihany, fantsom-pahitalavitra telo farafahakeliny no voaràra tsy hitatitra ny hetsi-panoherana.
Ao amin'ny firenena iray izay mitsitaitaika mahalana ny fahalalahan'ny fampitam-baovao, tsy manakana ny Nikaragoana, izay mandefa mivantana, misioka sy mibilaogy an-dahatsary momba ny krizy eny ifotony ny sivana.
Nalaza be tao amin'ny Twitter sy Facebook ny tenirohy tahaka ny #SOSNicaragua, #SOSINSS ary #QueSeRindaTuMadre, ary nampidirina tao amin'ny Dropbox ny lahatsary tsy nisy fanitsiana. Amin'ny alàlan'ny fikatrohana an-tserasera, niangavy fanohanana iraisam-pirenena ny Nikaragoana, saingy mangataka manokana an'i Etazonia mba tsy hitsabatsabaka.
Mpanao fihetsiketsehana tao Managua. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Euronews.
Na dia endriky ny hetsika aza ny mpianatry ny lisea, manohana azy ireo am-pivitrihana ny Nikaragoana avy amin'ny sehatra ara-politika rehetra, manomboka amin'ny vondrona feminista sy ny tantsaha, ny mpisotro ronono ary ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Izany no mahatonga ireo mpanao fihetsiketsehana milaza fa tsy mifamatotra amin'ny antoko politika manokana izy ireo, fa manao fangatahana amin'ny anaran'ny zon'olombelona sy ny demaokrasia ao Nikaragoa. Miantso ny tenan'izy ireo hoe “mifandamin-tena- mampiantso tena” ireo mpanao fihetsiketsehana.”
Mpanao gazety Wilfredo Miranda naka sarimihetsika ny fihetsiketsehana ahitana ireo mpanao fihetsiketsehana miantsoantso am-piesoana hoe “eto ny vitsy an'isa”, manondro ny fihevitry ny filoha lefitra Murillo fa Nikaragoana vitsy an'isa ihany no hita ao amin'ny fihetsiketsehana.
“Eto ny vitsy an'isa”, valinteny ho an'i Rosario Murillo
Koa satria ny mpianatra no nizaka ny herisetra sy ny famonoana ataon'ny polisy, dia nanangona fitaovana sy fanafody ho azy ireo any amin'ny anjerimanontolo sy ao amin'ny Katedralin'i Managua ny olon-tsotra, satria manohana ny fitroarana ny fiangonana.
Ao amin'ny lahatsary navoakan'i Franklin Leonel tao amin'ny Facebook, mahita mpianatra sy dokotera mikarakara ireo naratra ao amin'ny oniversite isika. Tamin'ny soratra ambanin'ny lahatsary, nanoratra izy hoe:
Tsy jiolahy ireo !!! #SOSNicaragua mamono ny mpianatray ry zareo !!!
Niovaova tamin'ny fanambarana ampahibemaso ny fijery ofisialin'ny governemanta, saingy toa mitohy ny herisetra ataon'ny fanjakana
Tsy niraharaha ampahibemaso ny hetsi-panoherana nandritra ny telo andro ny filoha Ortega, talohan'ny nisehoany tamin'ny 21 Aprily. Nihamaro ny tafika miaramila teny an-dalambe taorian'izany. Nanambara izy avy eo fa misokatra amin'ny fifampiresahana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina, izay nanaiky ny fanasana eo ambany fepetra sasany, toy ny fanasana ny faribolana hafa eo amin'ny fiarahamonina ho eo amin'izany fifampiresahana izany. Tsy namaly ny filoha Ortega fa nanafoana ny fanovàna momba ny fiahiana ara-tsosialy rehetra izy tamin'ny 22 Aprily.
Saingy niitatra tsy nihanona tamin'ny fanitsiana ny fiahiana ara-tsosialy intsony ny fitakiana tamin'ny hetsi-panoherana. Mitaky ny rariny ho an'ireo izay novonoin'ny basin'ny polisy sy ny miaramila ireo mpanao fihetsiketsehana, ary mitaky ny famaranana ny kolikoly ataon'ny governemanta. Ny sasany indray mitaky ny fanafoanana tanteraka ny governemantan'i Ortega.
Tao amin'ny Facebook, nandefa lahatsary manazava ny toe-draharaha i Leonor Zúniga, mpanohana ny hetsi-panoherana:
… leo ny vahoaka. Efa 11 taona izay no tao anatin'ny [fanjakana] didy jadona tanteraka izahay, izay niharan'ny famoretana hatrany, ary atao mangingina ny fanapahan-kevitry ny governemanta, tsy mba raharahiana mihitsy izahay.
Heveriko fa [ny fanavaozana ny fiahiana ara-tsosialy] no tafahoatra farany.
Ny fanavaozana ny fiahiana ara-tsosialy amin'izao fotoana izao, araka ny filazan'i Zúniga, no zavatra tafahoatra farany amin'ny fitontongan'ny andraikitry ny governemanta, ny fepetra ara-toekarena, ny fahasimban'ny tontolo iainana (ao anatin'izany ny doro ala vao haingana tao anatin'ny valan-javaboahary Indio Maíz io) ary ny faharendrehan'ireo andrim-panjakana demaokratika amin'ny ankapobeny.
Niaina teo ambany fitondran'ny mpanao didy jadona Somoza i Nikaragoà, firenena ahitana mponina enina tapitrisa, mandra-panongan'ny Revolisiona Sandinista ny governemanta tamin'ny taona 1979. Nandritra ny taompolo 1980, nisy ny ady an-trano goavana teo amin'ny fitondrana Sandinista sy ny “Contras”, mpiady avy amin'ny mpanohitra novatsiana ara-bola sy ara-pitaovana avy amin'ny governemanta Amerikana. Daniel Ortega, mpiady anaty akata teo aloha sady mpikambana ao amin'ny Manda Liberaly Nasionaly Sandinista (FSLN amin'ny Espaniola) no voafidy ho filoha tamin'ny taona 1985. Nitondra hatrany izy mandra-paharesy azy tamin'ny fifidianana nirotsahany hofidiana indray tamin'ny taona 1990, izay namarana ny ady an-trano.
Voafidy tamin'ny taona 2007 i Ortega ary mbola mijanona eo amin'ny fitondrana hatramin'izao. Nisongadina izy tamin'ny fanafoanana ny fetr'isan'ny fe-potoam-piasan'ny filoham-pirenena, ny fanampenam-bava tsy an-kiato atao amin'ny gazety, ny fifanarahana ara-barotra manjavozavo, ary ny fanarahamaso mivantana atao amin'ny polisy, ny miaramila sy ny sampam-pitsarana sy ny governemanta.
Fahalalahàna miteny 15 Avrily 2021